သီချင်းရိုက်ကူးရေးတွေလုပ်ရင်း မွန်မြတ်တဲ့ အလှူလေးပါ တခါထဲ လုပ်ခဲ့ပြန်တဲ့ ယုန်လေး – Suehninsi
ဂီတလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိနေသလို ရုပ်ရှင်လောကမှာပါ နေရာတစ်နေရာအခိုင်မာရပ်တည်ထားနိုင်သူကတော့ ယုန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယုန်လေးဟာ အသက်ငယ်ရွယ်ပေမယ့် စိတ်သဘောထားပြည့်ဝပြီး သူတစ်ပါးပေါ်မှာလည်း အမြဲကူညီတက်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားလေးကြောင့် အနုပညာရှင်တွေအပြင် ပရိသတ်တွေကပါ လေးစားချစ်ခင်နေရတဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လတ်ရှိမှာတော့
ယုန်လေးက Rap ဝါသနာရှင်လေးတွေဖြစ်တဲ့ A4 ကျော်စွာ ၊ Min Z တို့ နဲ့အတူ ပရိသတ်တွေနဲ့ ထပ်တူကျစေမယ့် ” စိတ်ကူး ” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖန်တီးနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးကို ရိုက်ကူးနေရင်း ယုန်လေးကတော့ မွန်မြတ်လှတဲ့ အလှူလေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေးမှာ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီပုံလေးတွေထဲမှာတော့
Rap ဝါသနာရှင်လေးတွေဖြစ်တဲ့ A4 ကျော်စွာ ၊ Min Z တို့ အတူ MC ကယားလေး ၊ Rap ကျားကြီး တို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒီအလှူလေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ယုန်လေးကတော့ ” စိတ်ကူး သီချင်း ရိုက်ကူးရေး ဒီနေ့မှပြီးစီး … သီချင်းလေးပေမယ့် Storyရယ် ပြောချင်တဲ့ အရာလေး ပေါ်အောင်ရိုက်ရတဲ့အတွက် ဇာတ်ကား ရိုက်သလိုပါပဲ သေချာရိုက်ချင်းလို့ ၃ရက် ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ် ….သီချင်လေးထဲ မှာ
အလှူလုပ်တာလေးတွေပါတော့ တကယ် လှူလိုက်ပါတယ်….. ကျွန်တော်ကတော့ ဆန်အိတ်တွေလှူလိုက်တယ်…. အားဖြည့်အချိုရည်ဆိုတော့ Rocker နဲ့ Veve ရေသန့်တွေ လှူပေးပါလားပြောတာ ချက်ချင်း နာရီပိုင်းအတွင်း ညတွင်းချင်းလာပို့သွားတယ်… Veve က မမာလာလို အရည်ချင်းရှိတဲ့လူကို ရထားတာ တကယ်တန်ဖိုးရှိပါတယ်….စာချူပ်ထဲ နဲ့ မဆိုင်တာတွေပါ အကူညီတောင်းတိုင်းစေတနာ
အပြည့်နဲ့ လိုက်လှူတဲ့ ကိုနိုင်ဖြိုး ကိုရွှေမန်းတို့နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက် Rocker BA ဖြစ်တဲ့ အတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်….26 ရက်နေ့ စိတ်ကူး Music Video တကယ်တင်ပါပြီ V7 , OG , Special9, သတိအန္တရာယ်ရှိသည် , Seven scene Media7Page တို့ကနေ တင်ပါမယ်..ဝန်းရံ ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ် ” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါသေးတယ်။ ကဲ…ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ 26 ရက်နေ့လေးမှာ ယုန်လေး ရဲ့ “စိတ်ကူး” သီချင်းလေးကို အားပေးလိုက်ပါဦးနော်….။
ဂီတလောကမှာအောငျမွငျမှုတှကေို ရရှိနသေလို ရုပျရှငျလောကမှာပါ နရောတဈနရောအခိုငျမာရပျတညျထားနိုငျသူကတော့ ယုနျလေးပဲဖွဈပါတယျ။ ယုနျလေးဟာ အသကျငယျရှယျပမေယျ့ စိတျသဘောထားပွညျ့ဝပွီး သူတဈပါးပျေါမှာလညျး အမွဲကူညီတကျတဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့စိတျထားလေးကွောငျ့ အနုပညာရှငျတှအေပွငျ ပရိသတျတှကေပါ လေးစားခဈြခငျနရေတဲ့ သူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ လတျရှိမှာတော့
ယုနျလေးက Rap ဝါသနာရှငျလေးတှဖွေဈတဲ့ A4 ကြျောစှာ ၊ Min Z တို့ နဲ့အတူ ပရိသတျတှနေဲ့ ထပျတူကစြမေယျ့ ” စိတျကူး ” ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးတဈပုဒျကို ဖနျတီးနပွေီလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒီသီခငျြးလေးကို ရိုကျကူးနရေငျး ယုနျလေးကတော့ မှနျမွတျလှတဲ့ အလှူလေးတဈခုပွုလုပျခဲ့တာကို သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပေးမှာ အမှတျတရပုံရိပျလေးတှကေိုတငျပေးလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီပုံလေးတှထေဲမှာတော့
Rap ဝါသနာရှငျလေးတှဖွေဈတဲ့ A4 ကြျောစှာ ၊ Min Z တို့ အတူ MC ကယားလေး ၊ Rap ကြားကွီး တို့လညျးတှရေ့ပါတယျ။ ဒီအလှူလေးနဲ့ ပတျသတျပွီး ယုနျလေးကတော့ ” စိတျကူး သီခငျြး ရိုကျကူးရေး ဒီနမှေ့ပွီးစီး … သီခငျြးလေးပမေယျ့ Storyရယျ ပွောခငျြတဲ့ အရာလေး ပျေါအောငျရိုကျရတဲ့အတှကျ ဇာတျကား ရိုကျသလိုပါပဲ သခြောရိုကျခငျြးလို့ ၃ရကျ ရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ ….သီခငျြလေးထဲ မှာ
အလှူလုပျတာလေးတှပေါတော့ တကယျ လှူလိုကျပါတယျ….. ကြှနျတျောကတော့ ဆနျအိတျတှလှေူလိုကျတယျ…. အားဖွညျ့အခြိုရညျဆိုတော့ Rocker နဲ့ Veve ရသေနျ့တှေ လှူပေးပါလားပွောတာ ခကျြခငျြး နာရီပိုငျးအတှငျး ညတှငျးခငျြးလာပို့သှားတယျ… Veve က မမာလာလို အရညျခငျြးရှိတဲ့လူကို ရထားတာ တကယျတနျဖိုးရှိပါတယျ….စာခြူပျထဲ နဲ့ မဆိုငျတာတှပေါ အကူညီတောငျးတိုငျးစတေနာ
အပွညျ့နဲ့ လိုကျလှူတဲ့ ကိုနိုငျဖွိုး ကိုရှမေနျးတို့နဲ့ အလုပျလုပျရတဲ့အတှကျ Rocker BA ဖွဈတဲ့ အတှကျလညျးဂုဏျယူပါတယျ….26 ရကျနေ့ စိတျကူး Music Video တကယျတငျပါပွီ V7 , OG , Special9, သတိအန်တရာယျရှိသညျ , Seven scene Media7Page တို့ကနေ တငျပါမယျ..ဝနျးရံ ပေးဖို့ တောငျးဆိုပါတယျ ” ဆိုပွီး ရေးသားထားပါသေးတယျ။ ကဲ…ခဈြပရိသတျကွီးရေ 26 ရကျနလေ့ေးမှာ ယုနျလေး ရဲ့ “စိတျကူး” သီခငျြးလေးကို အားပေးလိုကျပါဦးနျော….။
Source : Yone Lay’s Facebook | Reference & Credit : Myanmarload